Ungayakha Kanjani Imikhankaso Ye-imeyili Yenqola Yakho Yokuthenga | Martech Zone
ULwesihlanu, May 6, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Akungabazeki ukuthi ukuklama nokwenza okusebenzayo umkhankaso we-imeyili wokulahla inqola yokuthenga kuyasebenza. Eqinisweni, kuvulwe ngaphezu kwe-10% yama-imeyili okushiya inqola. Futhi inani loku-oda elijwayelekile lokuthenga ngama-imeyili okushiya inqola kungukuthi U-15% uphakeme kunokuthenga okujwayelekile. Awukwazi ukukala izinhloso eziningi ukwedlula isivakashi esizeni sakho esengeza into enqoleni yakho yokuthenga!
Njengabakhangisi, akukho okunye okubuhlungu kwenhliziyo njengokubona ukungena okukhulu kwezivakashi kuwebhusayithi yakho ye-ecommerce - ukuchitha isikhathi esivelele, ukungeza okuthile enqoleni yabo bese bekuyeka ngaphambi kokwenza inqubo yokuthengisa. Ngakho-ke, kusho ukuthini lokho? Ngabe bayanqunywa kumkhiqizo wakho unomphela? Mhlawumbe hhayi! Konke okudingeka ukwenze ukwenza umzamo owengeziwe wokubabuyisela emuva futhi ubazise ukuthi babalulekile.
Le infographic evela kuma-Monks e-imeyili ichaza indlela yokuziphatha yabathengi be-e-commerce, i-psychology ngemuva kwemikhankaso yokulahla inqola yokuthenga kanye nemikhankaso yokubuyisela emuva, kanye nokuchaza izindlela eziyi-7 zokwakha umkhankaso we-imeyili wokulahla inqola yokuthenga osebenzayo.
Izindaba Zesikhathi Nemvamisa - Kungakapheli imizuzu engama-60 ushiyile, kufanele ngabe uthumela i-imeyili yakho yokuqala. I-imeyili yesibili kufanele ithunyelwe kungakapheli amahora angama-24. Futhi i-imeyili yesithathu kufanele ithunyelwe kungakapheli izinsuku ezintathu kuya kwezingu-5. Ukuthumela ama-imeyili amathathu okulahlwa kubangela ukubuyiselwa okulingene okungama- $ 8.21 kutshalomali.
Cabanga Ukuhanjiswa Kwamahhala - Linga abathengi bakho abalahliwe ngokunikezwa, kungaba isaphulelo noma ukuhanjiswa kwamahhala. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukuhanjiswa kwamahhala kungasebenza ngokuphindwe kabili kunephesenti.
Balinge ngomnikelo ongenakuvinjelwa - Ucwaningo lukhombisile ukuthi i-imeyili yokulahla equkethe ukunikezwa kwesaphulelo sika-5% -10% ekuthengeni kokuqala ingakusiza isilinganiso sakho sokulahla.
Khombisa Izithombe Zomkhiqizo - Idivayisi yokulandelela iso yembula ukuthi kufaka phakathi isithombe somkhiqizo oshiywe esikhundleni sokuxhumanisa nje umkhiqizo ku-imeyili yokulahla inqola kudonsa ukunakekelwa okungaphezulu kunalokho ngaphandle.
Ukuthengiswa Kwesiphambano Akukubi - Ukudayisa imikhiqizo kulabo abalahlayo nakho kungaphenduka isibusiso sokugcina sebhizinisi lakho. Khombisa ezinye izindlela ezifanele kanye nabathengisa kakhulu.
Enza ngendlela oyifisayo Ama-imeyili Okushiya - Sebenzisa umlando wokuphequlula wesivakashi sakho nokuthenga kwangaphambilini ukuhlela okunikezwayo okwenzelwe wena.
Xazulula imibuzo - Ama-imeyili okushiya inqola angasiza ekuxazululeni imibuzo yabantu abalahlayo - abanikeze imininingwane eyanele futhi abasize benze isinqumo sokuthenga. Nikeza abathengi bakho izinketho ezanele ukuze ubasize bafinyelele kuwe futhi baxazululwe imibuzo yabo.
Izithandani zemikhankaso ye-imeyili yokulahla inqola yokuthenga enezikhangiso eziqondiswe kabusha namasu weziteshi eziningi ukukhulisa ukusebenza kwazo ngokuwina abathengi emuva.
Tags: ukulahlwaukulahlwa kwenqolainqola yokulahla ama-imeyiliukunikezwa kwesaphuleloimeyili ye-ecommerceukulahlwa kwenqola ye-imeyilii-imeyili ctaukunikezwa kwesaphulelo se-imeyiliizindela ze-imeyiliukuthumela kwamahhalaiziteshi eziningiukuqondisa kabusha
Yimiphi Imiklomelo Edume Kakhulu Yezipho Zakho Zephromoshini?